Aha 9 sitere na Jizọs na ihe ha pụtara
di Davide Sabbatini - Jenụwarị 6, 2022
E nwere ọtụtụ aha na-ewepụtara aha nke Jesus, site na Cristobal ruo Cristian ruo Christophe na Crisóstomo. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ aha nwa na-abịanụ, anyị nwere ụfọdụ echiche maka gị. Jizọs Kraịst na-agba akaebe maka nzọpụta, aha nke ịlọ ụwa.
Site na Grik Kristos (ihe dị nsọ) na phorein (onye na-ebu). N'ezie, Christophe pụtara "onye na-eburu Kraịst". Martyr na Lycia (Turkey nke taa) na narị afọ nke atọ, e debere òtù nzuzo ya kemgbe narị afọ nke ise na Bithynia, ebe a raara ya nye basilica. Dị ka ọdịnala si kwuo, ọ bụ nnukwu onye ụgbọ mmiri na-enyere ndị njem ala nsọ aka ịgafe osimiri ahụ. Otu ụbọchị ọ zụrụ nwa nwere oke ibu: ọ bụ Kraịst. Mgbe ahụ, o nyeere ya aka ịgafe osimiri site n'ibunye ya n'azụ. Akụkọ a na-eme ka ọ bụrụ onye na-elekọta ndị njem.
2. Onye Kraịst
Site na Grik Kristos, nke pụtara "dị nsọ". Saint Christian ma ọ bụ Onye Kraịst bụ onye mọnk Polish, ndị brigands gburu na 1003 ya na ndị mọnk Italy anọ ndị ọzọ gara izisa ozi ọma Poland. Ụbọchị ya na-bụ 12 Nọvemba. Cristian ghọrọ aha zuru ezu ozugbo Iwu Constantine gasịrị na 313. Iwu a mere ka okpukpe nile nwee nnwere onwe ife ofufe, bụ́ ndị nwere ike “na-efe chi dị n’eluigwe n’ụzọ nke aka ha.”
Site na Grik chrysos (ọlaedo) na stoma (ọnụ), Chrysostom pụtara n'ụzọ nkịtị "ọnụ ọla edo" ma bụrụ aha njirimara nke bishọp nke Constantinople, St. Ọ kwadoro okwukwe Katọlik megide nrụgide nke ndị ọchịchị alaeze ukwu, nke mere ka a chụpụ ya na onyeisi ndị bishọp nke Constantinople ma chụga ya n'ikpere mmiri nke Oké Osimiri Ojii. . Ọ bụ ezie na Chrysostom etymologically adịghị enweta site na "Kraịst", nsochi sonic na-enye ya ohere kwesịrị ekwesị na nhọrọ a.
Ndị Cristóbal nwere onye senti onye nlekọta n’ime onwe nke Cristobal de Santa Catalina a gọziri agọzi, onye ụkọchukwu Spen nke narị afọ nke 1670 na onye guzobere ọgbakọ Jisọs nke Nazaret na-ele ọbịa. Otu nwoke dị nsọ nke jikọtara ọrụ ya dị ka nọọsụ n'ụlọ ọgwụ na ozi onye nchụàjà ya. Na 1690 ọ ghọrọ akụkụ nke atọ Order nke St. Francis ma mechaa tinye aka n'ijere ndị ogbenye ozi site n'ịmepụta òtù ụmụnna Francis na-ele ọbịa nke Jizọs nke Nazaret. Na 24, n'etiti ọrịa ọgbụgbọ ọgbụgbọ, o tinyere onwe ya n'ilekọta ndị ọrịa. O mechara bute ọrịa wee nwụọ na Julaị 2013. Ile ọbịa nke Fada Cristóbal hiwere na-aga n'ihu taa na ọgbakọ nke Franciscan Hospitaller Sisters of Jesus of Nazaret. E meriri ya na 24 ma ụbọchị ya bụ Julaị XNUMXth.
5. Onye Kraịst
Mwepụta Portuguese nke Cristian. Saint Christian bụ onye mọnk Polish nke ndị ohi gburu na 1003 ya na ndị mọnk Italy anọ ndị ọzọ gara izisa ozi ọma Poland. Ụbọchị ya na-bụ 12 Nọvemba.
Aha Chrétien bụ ụdị Cristian ochie nke onye France na-ede uri bụ Chrétien de Troyes mere ka ama ama. Saint Christian bụ onye mọnk Polish nke ndị ohi gburu na 1003 ya na ndị mọnk Italy anọ ndị ọzọ gara izisa ozi ọma Poland. Ụbọchị ya na-bụ 12 Nọvemba. Naanị mmadụ 41 ejirila aha a kemgbe 1950.
Diminutive nke Christophe ma ọ bụ Onye Kraịst, nke a na-ejikarị na mba Anglo-Saxon. Dabere na onye senti a họpụtara ahọpụtara, a na-eme Chris n'August 21 (San Cristobal; ma ọ bụ Julaị 10 na Spain) ma ọ bụ Nọvemba 12 (San Cristian).
Kristan bụ ụdị Breton nke Cristian.
Kristen (ma ọ bụ Krysten) bụ aha nwoke Danish ma ọ bụ Norwegian maka Cristian.
Ihe atọ Ndị Kraịst kwesịrị ịma gbasara nchegbu na ịda mbà n’obi
Gịnị kpatara ekwensu enweghị ike iburu aha nsọ nke Meri?
Gịnị bụ Christmas? Ememme Jizọs ka ọ bụ emume ndị ọgọ mmụọ?
Gịnị bụ biakwa obibia? Ebee ka okwu a si abịa? Kedu ka esi emepụta ya?
Otú Onye Kraịst na-aghaghị isi meghachi omume n’ịkpọasị na iyi ọha egwu
Ịnata udo n'aka ezighi ezi? Ka anyị doo anya